မြ၀တီ - ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Tuesday, 25 June 2019 22:13 font size decrease font size increase font size
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်း မဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ၌ တပ်မတော်၏ ဒုတိယအကြိမ် တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကာလအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ကျန်ရှိသည့် EAO များနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Read 232 times Last modified on Tuesday, 25 June 2019 22:15
More in this category: « ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူသားလုံခြုံရေးဌာန အကြီးတန်းစေ့စပ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး Dr. Julian Thomas Hottinger နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး တပ်မတော်၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းပကားကောင်းမွန်မှသာ အများက လေးစားကြမည်ဖြစ်၊ ကာကွယ်ရေးစွမ်းပကားကို ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်နေ၊ ကာကွယ်ရေးစွမ်းပကား လျော့နည်း သွားခြင်းမရှိစေရန် ကာကွယ် ရေးအမြင်ဖြင့်သတိပြုကြရန်လို »